Inhloko Zendaba Nhlangula 24, 2020
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba basacubungula ukuthi abantu abathathu abafunyenwe beleCovid 19 phakathi kwabalitshumi lantathu-13, abatholakale belayo ngokutshona kwelanga langoLwesibili, bengabe beyithelelwe ngaphi sibili. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale beleCovid 19, eZimbabwe, kwabangamakhulu edlula amahlanu-525.
AbeMDC-T ekhokhelwa nguDr Thokozani Khuphe bathi abeMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba weHigh Court bedinga ukuba kungaze kwenziwa ukhetho lwama By-Elections.
Isizalwane seZimbabwe kweleSouth Africa uNkosazana Sinanzeni Sithole osebanjwe ngumkhuhlane weCoronavirus ukhuthaza ezinye izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba lumkhuhlane udla amahabulo.
Iziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukwi zithi isimo siqhubeka sisiba lukhuni ngesikhathi ukudla kusilela, njalo inhlalakahle yabo inganakwa nguhulumende weBotswana kanye lenhlanganiso yeziphepheli eyeUnited Nation's High Commission on Refugees.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo ‘Diaspora Forum’ sikhangela okwenziwa yizizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe.